နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ကမ္ဘာတစ်လွား သတင်းတိုထွာများ (News in Brief 290609)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:04 AM
Nay Lin June 29, 2009 at 12:38 PM
khin oo may June 29, 2009 at 12:45 PM
khin oo may June 29, 2009 at 12:46 PM
Ko Boyz June 29, 2009 at 1:21 PM
စုံသေးဘူးဗျ။ ပျင်းနေမှာစိုးလို့ ဟော့ဖြစ်နေတာပဲ ရွေးတင်တာ။
ဒါတောင် ဟိုကူးဒီကူးဆိုတာ အပြောခံရသေးတာ...။
Thandar Lwin June 29, 2009 at 1:34 PM
how can u know that news?
can search datas for the interested news, can write new post, can visit & write comment to others blog.
how to arrange the time.
hee hee + - x :- ( innnnnnnnn how to type 'a sar') + - x ****
Ko Boyz June 29, 2009 at 1:43 PM
လွယ်ပါတယ်...။ RSS ဆိုတာလေးကို ဖုန်းထဲ ထည့်ထားတယ်။ မနက်တိုင်း ရုံးမလာခင်ကို အိမ်က ၀ိုင်ယာလက်စ်လေးနဲ့ ချိတ်တယ်။ update လေးတွေ ယူတယ်။ ရုံးအလာ ကားပေါ်မှာ ဖတ်တယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ http://news.google.com ကလဲ သတင်းစုံတယ်။
mae June 29, 2009 at 7:29 PM
စိတ်မဝင်စားကြောင်း ဝင်ပြောတာပါ၊ သတင်းစာမှာ ဖတ်ပြီးသားတွေကို
KTz June 29, 2009 at 7:50 PM
Brazil aldy won over US. thx for sharing :)
Ko Boyz June 29, 2009 at 8:01 PM
At least I got real response from one audience. Hehehe
khin oo may June 29, 2009 at 10:20 PM
အဲဒါပင့်ပေးတယ်ခေါ်တယ။် ချင့်ချိန်.. ကိုယ့်ဘာသာ...
Ko Boyz June 29, 2009 at 10:28 PM
ခမျာ တော်တော် ပူလောင်နေမှာပဲ....။
မီးမီးချစ် June 29, 2009 at 11:05 PM
တို့ တော့ အိုင်ဖုန်း လဲ မဝယ်နိင်ပါဘူးကွယ်..
ဆိုင်ခဏ ခဏ သွားနေတဲ့C902 ဂိန်ဖုန်း လေးပဲ ရှိတယ်..
khin oo may June 29, 2009 at 11:06 PM
Ko Boyz June 29, 2009 at 11:09 PM
ဆိုက်ဘာရှော့ကြီး ကိုင်နေတဲ့ မီးမီး.. သူဌေးညည်း လာညည်းပြနေတယ်။
ဟိ.. ကျုပ်လဲ ဆိုနီ အဲရစ်ဆန်ပဲ။ ဒဗလျူ၆၉၀။ ဝေါ့မင်းစီးရီး...။
khin oo may June 30, 2009 at 6:17 AM
မြစ်ကျိုးအင်း June 30, 2009 at 11:10 PM
အဲလိုသာစုပေးထာမယ်ဆို အချိန်တွေအများကြီးချုံ့လို့ ရပြီ...။
ဟဲဟဲ အပျင်းကြီးတာလို့များ ဆိုမလား...။
Ko Boyz June 30, 2009 at 11:11 PM
အပျင်းတစ်နေတဲ့ လူတွေ တော်တော်များတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်...။ :D